Okpomoku nke uwa akwusighi site na 1998 rue 2012 | Netwọk Mgbasa Ozi
Okpomoku di elu nke uwa akwusighi site na 1998 rue 2012, ihe omumu choputara
Dị ka ọmụmụ ọhụrụ e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ 'Nature Climate Change' si dị, enweghi data na okpomoku nke Arctic mere ka odi ngwa ngwa na okpomoku uwa n’agbata 1998 na 2012. Ndị ọkà mmụta sayensị si Mahadum Alaska Faibanks (UAF), tinyere ndị ọkachamara ndị ọzọ si China, wuru ihe izizi mbụ nke ụwa.
N'ime ime nke a, ha achọpụtala nke ahụ ọnụ ọgụgụ nke okpomoku zuru ụwa ọnụ na-aga n'ihu na-abawanye na 0,112 Celsius kwa afọ kama ịbelata ruo ogo 0,05 kwa afọ iri n'oge ahụ, dị ka e chere na mbụ.
Ndị otu ndị ọkà mmụta sayensị gụghachitere nkezi ụwa n'etiti 1998 na 2012 na ihe ha chọpụtara bụ n'ezie ihe dị ịtụnanya: Arctic agbaala okpomoku nke ukwu karie uwa nke ozo. "Anyị na-eme atụmatụ ọnụọgụ okpomọkụ ụwa ọhụrụ nke Arctic na 0,659 Celsius kwa afọ iri n'oge ahụ." Ihe omumu ndi gara aga kwubiri na okpomoku di 0,130 degrees kwa afo. A maraworị na ọ bụ mpaghara dị nnọọ mfe, mana akụkọ ọhụrụ a na-egosi anyị na ezigbo ọnọdụ ka njọ.
Ọtụtụ atụmatụ ugbu a na-eji data zuru ụwa ọnụ na-anọchi anya ogologo oge, mana Arctic enweghị netwọk ọrụ siri ike iji chịkọta data okpomọkụ. Ya mere, ndị nchọpụta ahụ dabere na data nke International Arctic Buoy Program na Mahadum Washington (United States) chịkọtara, ma dozie ihu igwe dị n'oké osimiri site na United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Maka data zuru ụwa ọnụ.
Arctic dị, ma ugbu a karịa mgbe ọ bụla, mpaghara nke ndị na-eme nchọpụta ga-aga n'ihu na-amụ, n'ihi na ọ bụrụ na a kwenyere na ọ gaghị ezu iji metụta ogo ụwa niile, dị ka onye sayensị nke mbara igwe Xiangdong Zhang, nke UAF International Arctic Research Centre, Arctic »bụ akụkụ dị mkpa nke akụkụ ahụ azịza ya metụtara anyị niile".
Iji mụtakwuo, pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Okpomoku di elu nke uwa akwusighi site na 1998 rue 2012, ihe omumu choputara
Otu nzukọ nke pola bea 200 na-adọ aka ná ntị banyere mgbanwe ihu igwe
Vidio: NASA na-egosi anyị etu oge ajọ ifufe nke afọ 2017 dị